Mutongo weChikumbiro Chekuti Chin'ono Abvisiswe Mari yeChibatiso Woitwa neChina
Hopewell Chin’ono With Nelson Chamisa
Mutongi wedare, Amai Marehwanazvo Gofa, vati vachapa mutongo wavo neChina pachikumbiro chemutori wenhau, Hopewell Chin’ono, chekuti apihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake.
Asi mutongo uyu wanga uchifanirwa kupihwa nhasi sekutaura kwavo Amai Gofa nemusi weChipiri.
Amai Gofa vatura mashoko aya mushure mekunzwa zvaturwa naChin’ono nhasi mudare.
Achitaura mudare, Chin’ono ati kunyora kwaakaita kuti zvainge zvaitwa nebazi reNational Prosecuting Authority kuti rakanga ratora danho rekusapikisa chikumbiro chaizoitwa mudare nemutungamiri weZimbabwe Miners’ Federation avo vakambomiswa basa, Muzvare Henrietta Rushwaya, hakuna chakwaivhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare sezvo nyaya iyi yakanga isati yaunzwa mudare.
Chin’ono ati zvaakaita ndizvo zvinotarisirwa kuitwa nevatori venhau kana vachifungidzira kuti zvinhu hazvisi kufambiswa zvakanaka mumapazi ehurumende zvikurusei kana paine humbowo sezvakaitika panyaya yaMuzvare Rushwaya.
Chin’ono ati akanyora zvaakanyora paTwitter mushure mekunge awona chatove chijairiro chehurumende kusapikisa zvikumbiro zvekubhadhara mari yechibatiso kuvanhu vanenge vakatarisana nenyaya hombe vakapa nyaya yevaimbova gurukota rezvehutano, VaObadiah Moyo neyaMuzvare Rushwaya achiti izvi zvinoratidza kuti pane huori hunenge huchiitika.
Chin’ono audza dare kuti haana chikonzero chekutiza kutongwa panyaya kana akapihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso achiti mhosva iyi idiki zvikuru kana ichienzaniswa neimwe yaari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire iyo yakatarisira kutanga kutongwa musi waZvita 7.
Chin’ono ataura izvi mushure mekunge muchuchisi panyaya iyi, VaLancelot Mutsokoti, vaudza dare kuti Chin’ono anogona kutizira kune dzimwe nyika uye munhu anogara achipara mhosva achishandisa dandemutande rake reTwitter.
Asi Chin’ono ati munhu ane midziyo inokosha zvekuti haangatize kutongwa uye ati haasati ambobatwa nemhosva mungave muZimbabwe kana kunze kwenyika zvekuti anganzi nemuchuchisi ihoromori.
Chin’ono ati zvataurwa nemuchuchisi izvi kumutuka kuri pachena.
Gweta rake, Amai Beatrice Mtetwa, vaudzawo dare kuti hapana humbowo hwasvitswa nemuchuchisi wenyaya iyi pamwe nemupurisa arikuferefeta nyaya iyi hunoratidza Chin’ono akapara mhosva yaari kupomerwa kunyange hazvo dare rakatura mutongo nezuro wekuti pane fungidziro yekuti Chin’ono akapara mhosva yaari kupomerwa iyi.
Asi VaMutsokoti varamba vakatsika madziro vachiti zvakaturwa nemutongi nezuro pachikumbiro chaChin’ono chekuti asaiswe pa remand humbowo hwakakwana hunoita kuti Chin’ono asakodzere kupihwa mari yechibatiso.
Rimwe remagweta aChin’ono, VaGift Mtisi, vaudza Studio 7 kuti vapedza kusvitsa chikumbiro chaChin’ono.
Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, magweta ari kumirira Muzvare Rushwaya nevamwe vavo vana vanosanganisira vasori vaviri avo vari kupomerwa mhosva yekunzi vaida kuburitsa goridhe rairema makirogiramu matanhatu kunze kwenyika zvisiri pamutemo, apedzawo kusvitsa chikumbiro chekuti vasungwa ava vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Mutongi wedare panyaya iyi, VaNgoni Nduna, vati vachatura mutongo wavo neMuvhuro pachikumbiro ichi vachiti zvakasvitswa kudare nemagweta evasungwa pamwe nevachuchisi zvakawandisa zvekuti zvinoda nguva yakareba kuti vature mutongo wavo.